नेपाल लाइभ बुधबार, भदौ २५, २०७६, १७:१७
काठमाडौं- फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्डका लागि स्पेनिस क्लब बार्सिलोनामा रहेका अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी र इंग्लिस क्लब लिभरपुलमा रहेका नेदरल्याण्ड्सका भर्जिल भ्यान डाइकसँगै इटालियन क्लब युभेन्टसमा रहेका पोर्चुगलका क्रिष्टियानो रोनाल्डो प्रतिस्पर्धामा छन्।
युइएफए वर्ष खेलाडीमा भ्यान डाइकले मेस्सी र रोनाल्डोलाई पछि पार्दै उपाधि जितेपछि फुटबलमा दशकदेखिको एकछत्र राज कमजोर बनेको हो कि भन्ने बहस भइरहेको थियो। तर २०२० को युरोकप छनोट अन्तर्गत लिथुवानियाविरुद्धको खेलमा ४ गोल गर्दै रोनाल्डोले ३४ वर्षको उमेरमा पनि आफ्नो उत्कृष्टता सावित गरिदिए।
लिथुवानियालाई ५-१ ले हराएको खेलमा रोनाल्डोले ४ गोल गरेका हुन्। लिथुवानियाविरुद्धको ह्याट्रिक उनको ५४ औँ फुटबल ह्याट्रिकसमेत हो। उनले स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका लागि ४४, पोर्चुगलका लागि ८ साथै युभेन्टस र म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि १/१ ह्याट्रिक गरेका छन्।
लिथुवानियाविरुद्ध गोल गरेसँगै रोनाल्डो भिन्न ४० देशविरुद्ध गोल गर्ने खेलाडी पनि बनेका छन्। युरोपमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी बनेका रोनाल्डोले युरोपियन च्याम्पियनसिप छनोटमा पनि सर्वाधिक २५ गोल गरेका छन्।
रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि १६० खेलमा ९३ गोल गरेका छन्। जुन अन्तर्राष्ट्रिय गोलको कीर्तिमानमा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। उनी अघि इरानका अलि डाइले १०९ गोल गरेका छन्। गएको सिजनको खेललाई हेर्ने हो भने पनि रोनाल्डोले युभेन्टसबाट ४३ र पोर्चुगलबाट ४ गरेर खेलेका ४७ खेलमा ३१ गोल बनाए।
कीर्तिमानहरुको उचाइमा चढिरहँदा विश्व फुटबलमा मानिएका केही व्यक्तिसँगै अन्य खेलमा लागेकाहरु पनि एक खेलाडीका रुपमा रोनाल्डोको तारिफ गरिरहेका हुन्छन्। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको आधिकारिक वेवसाइटमा रोनाल्डोबारे बोलिएका यस्तै केही भनाइलाई राखिएको छ।
डिएगो म्याराडोना - जादुयी कौशलले छोइएका केही खेलाडी हुन्छन्। सत्य कुरा के हो भने हामी अर्जेन्टिनीहरु आफूसँग मेस्सी भएकोमा खुसी हुन्छौँ र सोच्छौँ ऊ स्पेनमा खेल्न नजाओस्। र अर्का त खतरनाक छन्। रोनाल्डो शक्तिका पर्याय हुन् साथै जादुगर पनि।
रियो फर्डिनान्ड - रोनाल्डो फुटबलका जिवित देवता हुन्। उनले जे गरिरहेका छन् त्यो असम्भव छ। च्याम्पियन्स लिगमा होस् या अन्यत्र तपाइँले सोच्न मात्र सक्ने हरेक कीर्तिमान उनले बनाइरहेका छन्।
रोनाल्डो ‘फेनोमेनो’ - म अभ्यास गर्थें किनभने मलाई राम्रो बन्नु थियो। ऊ अभ्यास गर्छ किनभने ऊ अभ्यासलाई माया गर्छ। यस्ता निकै कम खेलाडी छन् जो आफ्नो शरीरको यस्तो ख्याल राख्छन्। सुधारको इच्छा उनमा जस्तो छ त्यो अविश्वसनीय छ।
फर्नान्डो सान्तोष - विश्वमा त्यस्तो कुनै मैदान छैन जहाँ रोनाल्डोका लागि खुसीले तालि नबजाइने होस्, उनी विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। विश्वमा केही मात्र प्रतिभाशाली चित्रकार हुन्छन्, मूर्तिकार हुन्छन् उनी फुटबलमा त्यस्तै हुन्।
जिनेदिने जिदान - यस्तो लाग्छ, रोनाल्डो यो पृथ्वीभन्दा बाहिरका कोही हुन्। उनी हुँदा गोल हुन्छ भन्ने विश्वास शतप्रतिसत हुन्छ। उनी असाध्यै भिन्न खेलाडी हुन्।
रुइ कोस्टा - उनीबाट केलाई भिन्न राखेर हेर्ने? उनको जितको आकांक्षा या के? उनी जस्तो जितको भोको मैले अरु देखेको छैन। उनी हरेक खेल यसरी खेल्छन् कि मानौँ त्यो उनको खेल जीवनकै अन्तिम खेल हो।
क्रिस्टोफ पिएटेक - वास्तवमै रोनाल्डो सबैथोक हुन्। उनी अहिले विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। अझ म यो पनि भन्छु कि उनी फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी हुन्।
जर्जियो चिलेनी - रोनाल्डो उसेन बोल्ट र रोजर फेडेरर जस्तै हुन्। उनी एलियन हुन्।
जोआओ फेलिक्स - उनी अभूतपूर्व काम गर्छन्। उनी अनुकरणीय फुटबलर हुन्। उनी वर्षौंदेखि विश्व फुटबलमा उत्कृष्ट छन् र अझै वर्षौसम्म रहन्छन्। रियल मड्रिडले पक्कै पनि उनको अभाव महसुस गरिरहेको छ।
ग्यारेथ बेल - क्रिष्टियानो एक अविश्वसनीय खेलाडी हुन्। उनले रियल मडिउनले रियल मड्रिडका लागि जे गरे त्यो हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, उनले गरेका गोलको संख्या हेर्दा पनि बुझिन्छ। इटाली गएर पनि उनले त्यही गरिरहेका छन्।
रुबेन नेभेस - उनी अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। त्यो भन्नमा मलाई कुनै दुविधा छैन।
रोमारियो - इतिहासका सर्वश्रेष्ठ पाँच खेलाडीको नाम लिँदा क्रिष्टियानो रोनाल्डोको नाम पनि आउँछ। उनी निर्विवाद प्रतिभावान खेलाडीका साथै अविश्वसनीय क्षमता भएका खेलाडी हुन्।
कोनर म्याकग्रेगर (मार्सल आर्ट खेलाडी) - क्रिष्टियानो अनुशासनका पर्याय हुन्। राम्रा खेलाडी हुन्। पूर्ण व्यक्तित्व भएका राम्रा व्यक्ति हुन्। आफ्नो कामप्रतिको उनको लगनशीलता पछ्याउन योग्य छ। उनले नयाँ पुस्ताका धेरैलाई फुटबलमा आकर्षित गरेका छन्।
विराट कोहली (क्रिकेट खेलाडी) - रोनाल्डो मेरो विचारमा नयाँ नयाँ चुनौती लिन मन पराउने खेलाडी हुन् र त्यो चुनौती पूरा पनि गर्छन्। मैले अहिलेसम्म देखेकोमा सबैभन्दा पूर्ण खेलाडी हुन् रोनाल्डो। अनि उनको कामको शैली र अनुशासन अतुलनीय छ। उनी मानिसहरुलाई प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। उनको नेतृत्व क्षमता पनि मलाई असाध्यै मन पर्छ।